Superhero အယောက် ၄၀ လောက်ပါဝင်မယ့် Avengers: Infinity War - MoviesFan
Superhero အယောက် ၄၀ လောက်ပါဝင်မယ့် Avengers: Infinity War
Marvel ရဲ့ superhero တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Falcon ရဲ့သရုပ်ဆောင် Anthony Mackie က Arizona မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Ace Comic Con မှာ ပရိသတ်တွေကိုပြောကြားသွားတာကတော့ မကြာမီပြသတော့မယ့် Avengers: Infinity War မှာ superhero အယောက် ၄၀ လောက်ပါဝင်တယ်ဆိုတာပါပဲ။ အဲဒီအကြောင်းကို Mackie က Infinity War ရိုက်ကွင်းအကြောင်းပြောရင်းနဲ့ တစ်ပါတည်းပြောပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်။
Infinity War Trailer မှာပါဝင်တဲ့ superhero တွေအများကြီးချကြတဲ့အခန်းကိုမှတ်မိပါသလား.. Mackie ရဲ့အဆိုအရဆိုရင် အဲဒီအခန်းကိုရိုက်ကူးတဲ့နေ့တုန်းက ရိုက်ကွင်းပေါ်မှာ superhero သရုပ်ဆောင်ပေါင်း ၄၀ လောက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
There was one day we were on set and were doing this scene that’s in the trailer where we’re all running to battle. You know, all of us are on set and it’s like forty superheroes. Empire
Captain America သရုပ်ဆောင် Chris Evan က Mackie ပြောတဲ့နေ့ကိုမှတ်မိကြောင်းနဲ့ အဲဒီနေ့တုန်းကရိုက်ကွင်းက အရမ်းပျော်စရာကောင်းကြောင်း ထပ်ဆောင်းပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အဲဒီအခန်းကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့ကိုလည်း ပရိသတ်တွေကို တိုက်တွန်းသွားပါသေးတယ်။
Infinity War မှာ အရှေ့က MCU ဇာတ်ကားတွေမှာဇာတ်အိမ်တည်လာတာတွေကို အလုံးအထည်နဲ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားမှာ Anvengers အဖွဲ့သားတွေနဲ့ သူတို့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေဟာ Infinity Stones တွေကိုလိုက်လံစုဆောင်းပြီး စကြာဝဠာကြီးကိုလွှမ်းမိုးဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ super villain ကြီး Thanos နဲ့ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Marvel ရဲ့ official synopsis မှာပြောထားသလိုဆိုရင် ကမ္ဘာကြီးရဲ့အနာဂတ်ဟာ မသေချာမရေရာဖြစ်နေပြီး Avengers တွေအရင်တုန်းကကြိုးစားခဲ့သမျှဟာ ဒီအချိန်အခိုက်အတန့်လေးအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Marvel ရဲ့ superhero တွေ Thanos ကိုဘယ်လိုရင်ဆိုင်ကြမယ်ဆိုတာကို လာမယ့် မေလ ၄ ရက်နေ့ကျရင် ပိတ်ကားထက်မှာအဖြေရှာလို့ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
ကဲ.. ထွက်ရှိဖို့လည်းသိပ်မလိုတော့ဖူးဆိုတော့ Trailer ပြန်ကြည့်.. Superhero အယောက် ၄၀ ကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပြီး သွေးပြန်နွှေးထားကြရအောင်လား…
Previous Post: မျှော်လင့်ချက်ရောင်ခြည်သမ်းလာတဲ့ ‘Edge of Tomorrow 2’
Next Post: အသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ ‘Ant-Man And The Wasp’ ဇာတ်ကားရဲ့ဓာတ်ပုံ